Morondava – Haitrano niniana natao ?: nirehitra ny biraon’ny Faritra, potika ny lisi-pifidianana… | NewsMada
Morondava – Haitrano niniana natao ?: nirehitra ny biraon’ny Faritra, potika ny lisi-pifidianana…
Par Taratra sur 07/08/2018
Ankoatra ny entana sy fitaovana maro (fanaka, ordinatera…), potika, may ny antontan-taratasy saropady, toy ny lisi-pifidianana, taratasim-basy… noho ny haintrano goavana nandrotika ny biraon’ny Faritra Menabe sy ny biraon’ny prefektiora, Morondava, omaly tolakandro. Loza tsy nahy sa niniana natao ?
Nirehitra tampoka noho ny fipoahana herinaratra ny biraon’ny Faritra tany Morondava, omaly tokony ho tamin’ny 2 ora tolakandro. Nijoalajoala ny afo ary may tamin’izany ny lisi-pifidianana rehetra tao anatiny. Nisy ihany ny entana navotan’ny olona, saingy izay tafavoaka nisy nohararaotin’ny mpangalatra, ka very tamin’izany ny ordinatera sy ny entana hafa.
Simba izay tsy very, toy ny ordinateran’ny CED izay rantsan’ny vaomiera mahaleo tena misahana ny fifidianana (Ceni), distrikan’i Morondava. Misy ny tahirim-baovaon’ny fifidianana izay hanontana ny lisi-pifidianana ho an’i Menabe manontolo ireo ordinatera simba sy very ary may ireo.
Nahery vaika ny afo ka adin’ny roa taty aoriana tsy mbola voafehy izany noho ny fitsokan’ny rivotra sy ny ireo entana mora mirehitra nandrafetana ny trano. Vita amin’ny hazo ny ankamaroany rindrina. Tsy misy mpamonjy voina ihany koa ny kaominina ambonivohitr’i Morondava, ka anisan’ny miteraka olana amin’ny famonoana afo. Fiaran’ny ASECNA no namonjena namonoana ny afo, omaly. Ny fitaovana vaovaon’ny BNGRC tsy afa-nahetsika, fa voalaza fa natao hitrohana rano ny fiarabe fa tsy hitifirana rano raha sendra haintrano. Voalaza fa fipoahan’ny herinaratra nahatonga ny afo, vokatry ny fitarihana jiro amin’ny asa ataon’ny BNGRC, ka izay no nitarika ny fahamaizan’ny biraon’ny faritra ny prefektioran’i Morondava.
May ny taratasim-basy
Levon’ny afo ny arsiva rehetra tao amin’ity biraon’ny prefektiora ity ka anisan’izany ny taratasy mikasika ny basy any Menabe. Anisan’ny saropady satria ao daholo ny ahafantarana izay manana basy sy mampiasa izany. Amin’izao fiparitahan’ny basy izao, ho sarotra ny fanaraha-maso izany. Mety misy ihany ny paik’ady ahafahan’ny any an-toerana mamerina manisa izany, saingy toe-javatra mety hampirongatra ny fiparitahan’ny basy izao. Manao ny fanadihadiana ny mpitandro filaminana manodidina ity tranga ity, amin’izao fotoana izao.